Mesut Ozil Oo Dardaarankii U Dambeeyey Siiyey Ciyaartooyada Arsenal
HomeChampions LeagueMesut Ozil Oo Dardaarankii U Dambeeyey Siiyey Ciyaartooyada Arsenal
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Mesut Ozil ayaa u sheegay ciyaartooyada kooxdiisa in ay muujiyaan kalsooni ay naftooda ku qabaan, taas muhiim u ah kulanka Monaco ee Champions League.
Kooxda Arsenal ayaa lugtii hore ee Champions League ee ay la ciyaartay Monaco waxa lagu garaacay 1-3 ciyaar ka dhacday garoonka Fly Emirates, waxaanay taasi keentay in dhalleecayn loo jeediyo kooxda tababare Wenger.
Mesut Ozil ayaa aaminsan in ciyaartooyada Arsenal ay awood u leeyihiin in ay ka badiyaan Monaco oo ay u gudbaan wareegga Quarter Final-ka ee Champions League haddii ay u ciyaaraan si deggan oo isku kalsoon.
“Muhiim weeyaan in bilowga ciyaartaba aanu gool dhalinno, haddiise ay dhici weydo waa in aanu Samir yeelano oo aanu ciyaarta ku dagaallano illaa daqiiqadda u dambaysa.
“Waa ciyaar ay khasab nagu tahay in aanu badino oo aanu dhalinno saddex gool, difaacana aanu adkaysano. Haddii aanu u ciyaarno si wanaagsan, awood ayaanu u leenahay in aanu ka badino Monaco. Waxa aan aaminsanahay in aanu haysano fursad dhab ah oo aanu ku soo baxno” sidaas ayuu yidhi Ozil.
Arsenal ayaa marti u noqon doonta Monaco, waxaana laga doonayaa in ay ku badiso ugu yaraan 2-0.
Qadar oo 500 milyan oo doolar ku kharashgaraysa Koobka Adduunka todobaad kasta
09/02/2017 Abdiwahab Ahmed
Inter Iyo Milan Oo Kufay Toddobaad Ay Juventus Iyo Napoli Guulo Gaadheen
Real Madrid oo dubbe madaxa kaga dhufatay Sporting Gijon
17/01/2016 Abdiwahab Ahmed